Maxay Haweenka U qayliyaan Xiliga Galmada Sariirta Ay Socoto | shumis.net
Home » galmada » Maxay Haweenka U qayliyaan Xiliga Galmada Sariirta Ay Socoto
Baaritaan dheer oo Ay sameeyeen Rag Ku Xeel dheer Arimaha Galmada Ayaa soo saaray In Sedex arin oo u sabab u Tahay qaylada haweenka ka soo yeerta xiliga ciyaar sariireedka gaar ahaan marka malabyarowga uu ku dhex mirqo , waa ayna ku kala duwan yihiin haweenka arintaan maadaama ay jiraan kuwo aysanba cod ka soo bixin xiliga ciyaarta .
Waxa ayna qaylada haweenka timaada marka afka hore ee malabyarowga uu gaaro goobta loo yaqaan G-Spot waana meesha haweenka ka helaan raaxada waalida ah , waxa ayna meeshaas ku taal dhakada sare darbiga xubinta haweenka ee gudaha, hadaad meeshaas malabyarowgada soo xoq-xoqo hawneeydas raaxo uma dhinna . Sidoo kale qaylada haweeka xiliga galmada waxa ay mararka qaar noqon kartaa xanuun ku yimaada afka hore ee xubinta xiliga malayarowga uu jiirayo .
Sidoo kale waxaa laga yaabaa in afka hore ee malabyarowga uu gaarayo oo uu taabanayo madaxa labada ukxan ee u dhaw minka , waxaadna ogataa in labadaas ukaxan xanuunkooda ay la mid yihiin iyadoo labada xaniinyo ee ninka laga garaaco. Sidoo kale hadii xubinta haweenka qalalan tahay xiliga ciyaarta iyana dhib ayay keeneysa waayo marka uu malabyarowga xog xogista ku sameeynayo darbiga xubinta haweenka waxa ay ku keeneysa xanuun .
Title: Maxay Haweenka U qayliyaan Xiliga Galmada Sariirta Ay Socoto